Nin u xukunaa kiiskii Caaisho Ilyaas oo la siidaayey – Radio Baidoa
Nin u xukunaa kiiskii Caaisho Ilyaas oo la siidaayey
By Webmaster	 On Feb 20, 2020
Wararka laga helayo Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ayaa waxaa ay sheegayaan in la siidaayey Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame, oo kamid ahaa saddexdii nin ee loo xukumay Kiiskii Caa’isha Ilyaas oo laba kamid ahaa la toogtey,kadib markii sida la sheegay ay inay labada qoys ka heshiiyeen.
Qoysaska labada dhinac ayaa waxaa ay ku heshiiyaan in mag ama Diyo la siiyo Qoyska Caaisho Ilyaas,sidaasina lagu siidaayey Cabdisalaan C/raxmaan Warsame,waxaana kamid ah waxyaabaha lagu heshiiyey.
Sidoo kale waxaa la isku afgartay in muddo Saddex Bilood gudahood ah in qoyska Cabdi Salaan ay ku bixiyaan inta hartay oo ah 25 Halaad,taas oo markii lacag ahaan loo qiimeeyo ay noqoneyso $12,500 oo Dollar.
Ugu dambeyn heshiiska ay wada gaareen Qoyska Caaisho Ilyaas Aadan in Ninka u xukunaa kiiskeeda ayaa waxaa ay u gudbiyeen,isaga oo qoraal ah laamaha Garsoorka iyo Amniga Puntland, waxaana sidaasi lagu amray in la sii daayo Xukmane Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame.
Ciidanka Danab & kuwa Daraawiishta Maamulka Jubbaland ayaa Howlgal kula wareegey Deegaano
Duqeyn ka dhacday Jubbada Dhexe & Dowladda oo faah faahisey